Akụkụ agwụcha | Otu-akwụsị Prototype Post Mmecha Services - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Ọrụ / Parts ishingrụcha
Site visual ụdị ikpeazụ mmepụta nkeji, anyị ọkà nlereanya eso nwere ike anya izute ahịa kpọmkwem kwuru na agba na rụchaa oge ọ bụla. CeateProto na-enye zuru ezu na ụlọ agwụcha na eserese ọrụ. Anyị ga-enye gị ngwọta kwesịrị ekwesị na ọpụrụiche dị elu maka gị
Omenala Ogologo-Ọrụ Mgbasa Ozi Otu-Kwụsị
Prototype Ndinam yiri nke ọ bụla n'ichepụta usoro. Ozugbo otu akụkụ si n’igwe pụta - ngwa nbipute 3D ma ọ bụ igwe ọdịnala nke ọdịnala CNC, ọ ga - enwe akara pụrụ iche na akara ngosi. Mgbe ihe ederede na-etinye aka na ngwa ahụ, agbanyeghị, ọ ga-adịwanye mma ma ọ bụ wepu ya n'elu akụkụ nke akụkụ ahụ. Nke ahụ bụ ịsị, iji nweta ọdịdị zuru oke nke ngwaahịa ikpeazụ gị, ihe ngosi a ga-enwerịrị usoro mmecha siri ike, nke na-akọwa usoro ikpeazụ achọrọ tupu ngwaahịa nwere ike ịdị ndụ n'ezie.
CreateProto's na ụlọ prototype finishing bụ ike nke na-enye ihe kasị mma post-imecha tinyere gbakọta & ụdị kwesịrị ekwesị, fastening & metal inserting, sanding & polishing, ọgbụgba ọkụ & brushing, sere & obibi. Anyị na- emecha arụmọrụ maka ahịa mma.
CreateProto nwere usoro ejikọtara iji mezuo mkpa gị dị iche iche. N'ime afọ 20 ndị ọkachamara nwere nkà na ndị nwere nkà na-emesi gị obi ike banyere agba, ọdịdị ma ọ bụ nchapụta nke akụkụ ma mezuo atụmanya gị. Lelee anyị prototype gụchara na nke abụọ nhazi nhọrọ ịchọta gị ngwọta, ma ọ bụ kpọtụrụ otu n'ime anyị raara onwe ya nye oru ngo injinia, anyị ga-ahụ ndị kasị mma na kwesịrị ekwesị ngwọta maka gị.
Finrụcha Aka na Fitdị Mma
Site de-na-egbu maramara na gluing, ndochi, modifying, pre-dabara, mmeson na gbakọta, anyị handcraft ọkachamara na-elekwasị anya ọ bụla engineering zuru ezu na imewe nkọwapụta, na-enyere ndị na-emepụta kpam kpam chepụta ha creativity.
Akụkụ a na-ahụkarị nke ịmecha ihe nlereanya na-agbakwunye ntinye ma ọ bụ mgbakọ na-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ịtinye ihe ntinye nke eriri na-enye ohere maka eri na-adịgide adịgide karị mgbe ihe chọrọ kposara ma ọ bụ bolts na usoro mgbakọ. A, emecha na-kere na-ụlọ, ma anyị otu nwekwara ike na-arụ ọrụ na ahịa ọnọ mmiri rụchaa na-ezukọta dị ka mkpa.
Na Createproto, ndị otu anyị ga - enyere aka imeri nsogbu niile nke ihe mgbochi injinia, na - enye azịza ma nweta ọrụ agwụla. Anyị na-agbasi mbọ ike izu okè n'akụkụ ọ bụla maka ọrụ ọ bụla.
Sanding & Nhicha
Enwere ọtụtụ ụzọ iji wepụ akara igwe, agbanyeghị, ọ bụrụ na emeghị usoro ahụ nke ọma, ọ nwere ike belata nhụjuanya nke akụkụ ma wepu nkọwa dị mkpa. Yabụ mgbe otu akụkụ nwere njirimara dị oke mkpa ma ọ bụ nnabata nnwere onwe, ọ kachasị mma ịtụgharị nye ọkachamara. Createproto na-ewepu ntụpọ ngwaahịa dịka burr, akara igwe na akara nrapado site na akụkụ ahụ site na iji aka aka na ọrụ aka na ịchachachasị maka ụdị mmezu nke omenala.
Sanding aka na-achọ onye nwere nkà ma na-ewe ọtụtụ awa. Ntọala nke akụkụ ahụ ga-akawanye mma ma belata iwe iwe iji mepụta ọdịdị dị mma na nke zuru oke.
Na aka Polish usoro a na-eji maka a mirror imecha on nkịtị plastic, metal akụkụ na doro anya acrylic akụkụ, nakwa dị ka vepo polishing polycarbonate iji nweta a kpọmkwem edo ewepụghị elu na ọkachamara ọkwa gloss gị prototype imecha, ma ọ bụ welie ngwa anya doo anya nke akụkụ doro anya.
Ma oru ngo gi choro ngwuputa oru, nkwekorita, imecha doro anya, nhicha anya, ma obu ihe ikuku, Createproto ga-enye gi oru ndi mmadu.
Ihe osise & Mbipụta
Paintinggba sere bụ isi ọrụ usoro maka ikpeazụ chọrọ agba na udidi nke ngwaahịa gị oru ngo. Mepụta ụlọ ọrụ na-etinye agba agba dị ọcha iji hụ na enweghị mmetọ na gburugburu ebe a na-enweghị ntụ maka eserese, ma na-achịkwa oke iru mmiri dị na ime ụlọ eserese. Ndị otu anyị na - ese ihe osise na - eji ngwa eji agba mmiri na ikuku na HVLP / LVLP teknụzụ atomization si SATA, IWATA na DeVilbiss. Ihe ndi ruru eru nke UV na acrylic 1K & 2K PU nke na-eme ka ihe ndi ozo di na PPG na Dupont na-enye ihe ndi ozo na uzo ndi ozo na nguzogide mmiri na ogwu di iche iche, yana ihe di egwu.
CreateProto na-ejikarị Pantone Matching Sistemụ na RAL Classic Sistem mee ka ihe kwekọọ na agba agba agbajikọtara maka akara agba ọ bụla ma ọ bụ agba agba swatch. Maka eserese agba abụọ ma ọ bụ ọtụtụ agba, anyị na-eme ihe nkpuchi kwesịrị ekwesị ma jiri teepu mee ka usoro nkpuchi ahụ sie ike ma dị ọcha. Na masking, anyị nwere ike kee ihe nke gị monolithic prototype n'ime ọtụtụ kwuchara maka a mgbagwoju anya anya dị ka 2K na 3K ịkpụzi.
Mostzọ kachasịsịsịsị maka ịhọrọ ahịrị bụ ịkpọ Mold-Tech text. Ọ bụrụ na ihe nlele ahụ chọrọ ịgbakwunye ederede nke yiri akụkụ plastik na-emepụta, anyị nwere ike ịcha anụ maka ụdị Mold-Tech maka iji nweta ihu na mmetụta achọrọ. Ọ bụrụ na ndị prototype kwesịrị ịdị nro na aka iji yie ihe karịrị-kpụrụ ahụ, anyị nwere ike nweta ya na agba, na ya pụta abụghị naanị otu anya, kamakwa ezigbo na aka mmetụta.
Ihe mkpuchi UV & EMI
Maka mkpuchi mkpuchi ọrụ, anyị nwere ike ịgafe ngwa ngwa iji hụ na akụkụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Ihe mkpuchi UV nwere ike iguzogide radieshon ultraviolet ma chebe ihe ndị dị n'okpuru iji mee ka anwụ ngwa ngwa ma iyi ma ọ bụ iguzogide nkwụsị. Na EMI, a na-eji mkpuchi ahụ ekpuchi ma ọ bụ nwee akụrụngwa eletriki site na magnetik ma ọ bụ ndabichi.
CreateProto nwere ike ịrụ laser etching na ibipụta akwụkwọ na prototypes nke dị mma iji kaa akara ngwaahịa gị tupu ọ banye n'ọkwa nrụpụta site na ịnwale na ịchọpụta ọnọdụ dị mma nke akara aha aha gị ma ọ bụ ozi omenala. Laser etching bụ nke na-adịgide adịgide ma agaghị asacha, chipped ma ọ bụ eyipụ. Full agba-ebi akwụkwọ dị ka nke ọma dị ka Pantone ma ọ bụ RAL agba kenha. Anyị na-enye mbipụta ihuenyo maka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ maka ngwaahịa ndị a na-adịghị ahụkebe.
Ọgwụ Ọgwụ Pụrụ Iche
Dika ulo oru nlebara anya bawanyere, o bu ya na ihe ndi nwere ike iji meputa ha. Ikike ziri ezi nwere ike ime ihe dị iche na ịga nke ọma nke ụdị prototype gị, ụdị gị ma ọ bụ ngwaahịa gị tupu ịmalite ịga n'ihu n'ichepụta usoro nke imepụta ihe. CreateProto na - arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ ahọpụtara nke ndị na - ere ahịa ọkacha mara iji nye gị mmezu pụrụ iche nke nwere ike inye aka rụpụta ụdị achọrọ. Mmekọrịta a na-ewere ọpụrụiche pụrụ iche na ọkwa ọhụrụ, nwee ike idozi nsogbu ma melite nkọwa ngwaahịa gị.
Emebere ihe ngosiProto na-enye otutu nhọrọ di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche site na ndi anyi kwesiri ntukwasi obi, dika anodizing, electroplating, chroming, chemical finishing, powder powder, etc. Ma odi anya ma obu oru, anyi nwere ike kwado ezigbo mmeputa nke oma plastic na metal omenala akụkụ.
CNC Rapid Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Prototyping, Fast Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, Otito Prototyping,